प्रधानन्यायाधीशले भागबन्डा खोज्ने हो भने संविधान नै समाप्त हुनसक्छ (भिडियोसहित ) | ईमाउण्टेन समाचार
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भएको ८८ आँै दिनमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदा मन्त्रीपरिषद्मा एक जना गैर सांसदले पनि हिस्सेदारी पाए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका तर्पबाट सर्वोच्चले खण्डन विज्ञप्ती जारी गरेको पाँच दिनपछि जबराका जेठान गजेन्द्र हमाल मन्त्री बनेका हुन् । हमाललाई मन्त्रीबनाउने निर्णयपछि देउवा सरकारको चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।
मन्त्री बन्न नपाएर सत्तारुढ गठबन्धन भित्र रुवाबासी चलेको वेला अचानक संसद् बाहिर रहेका अमुख व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन देउवा किन तम्सीए ? यो गम्भिर प्रश्नचौतर्फी रुपमा देउवा समक्ष तेर्सिएको छ । हुन त संविधानमा ६ महिनाका लागि गैर सांसदलाई पनिमन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ तर प्रधानन्यायधिशकै नातेदारलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने खास कारण के हो ?
भिडियो, राजनीति‐मा वर्गिकृतPmdeuba
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आज स्वदेश फर्कदै
प्रधानमन्त्री आज अमेरिका जाँदै : १२ गते ओमाबाट स्वदेश फर्कने
प्रधानमन्त्री देउवा शीतलनिवासमा